युभेन्टस: रोनाल्डोले पेनाल्टी चुकाए पनि क्लब फाइनलमा प्रवेश
प्रकाशित मितिः जेठ 31, 2077
115 पटक पढिएको
कोरोनाको महामारीपछि इटालिमा हिजो रातिबाट फुटबल पुनः सुरु भएको छ।
महामारीका कारण स्थगित फुटबल ९५ दिनपछि मैदान फर्किएको हो। मैदान फर्किएको पहिलो खेलमै युभेन्टस फरवार्ड क्रिस्टियाना रोनाल्डोले पेनाल्टीमा पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन्।
रोनाल्डोले गोल गर्न नसक्दा कोपा इटालियाको गएराति सम्पन्न खेल गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। युभेन्टसको घरेलु मैदानमा सम्पन्न खेलमा उसले प्रतिस्पर्धि एसी मिलानसँग गोलरहित बराबरी खेल्यो।
तर रोनाल्डोको पेनाल्टी मिस युभेन्टसलाई महँगो भने परेन। बराबरीका बाबजुद १३ पटकको उपाधि विजेता क्लाब फेरि फाइनलमा पुगेको छ। ४ महिनाअघि (फेब्रुरीअरी १३मा) भएको खेलको गोलका आधारमा युभेन्टस फाइनलमा पुगेको हो।
त्यो खेलमा युभेन्टसले मिलानको मैदानमा १–१ गोलको बराबरी खेलेको थियो। तर अवे गोलको महत्व धेरै हुने भएकाले सोही आधारमा युभेन्टस फाइनल प्रवेश गरेको हो।
फाइनलमा उसले इन्टरमिलान र नेपोलीको विजेता टोलीसँग खेल्ने छ।
गएराति भएको खेलको १६ औं मिनेटमा रोनाल्डोले एक लङ पास सहजै कन्ट्रोल गरे। तर मिलानका कोन्टेले उनको गोल हातले रोकेपछि युभेन्टसले पेनाल्टी पायो। रोनाल्डोले पोस्टको लेफ्ट कुनामा प्रहार गरेको गोल पिलरमा ठोकिएर बाहिर फर्किएको थियो। त्यससँगै युभेन्टसले गोल स्कोर गर्ने सुनौलो अवसर गुमाएको हो।
त्यसलगत्तै एन्टे रेविचले युभेन्टसका खेलाडीलाई फल गरे। त्यसपछि उनलाई रेफ्रीले रातो कार्ड देखाउँदै मैदान बाहिर पठाए। सुरुबाटै दबावमा आएको मिलान रेविचको बहिर्गमनसँगै अझै धेरै दबावमा आयो। तर अन्तिम समयसम्म पनि युभेन्टसले गोल स्कोर गर्न भने सकेन।
दुवै अध्यक्ष प्रफुल्ल मुद्रामा निस्किए: के नेकपाको संकट टर्यो ?
असार 24, 2077
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको संकट समाधान उन्मुख देखिएको छ । नेकपा अध्यक्ष तथा प�
नेकपा विवाद: फुटकाे संघारबाट ‘अस्थायी युद्धविराम’ तर्फ
असार 23, 2077
‘फेरियो छलफलको ढाँचा’सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विग्रहको बाटोमा डोर्‍याएको देखिए�
नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवको संयुक्त विज्ञप्तीः 'पार्टी फुट्न हुन्न'
असार 21, 2077
धरान । नेकपाको शिर्ष नेताहरुमा चुलिएको चरम मतभेदका कारण पार्टी फुट्ने चर्चा चलिरहेका बेला एक नं. प्रदेशक�
'सेल्टासँग बराबरीमा रोकियो एट्लेटि मड्रिड अंक पनि दुबै क्लबले बाँडे'
विद्यार्थीलाई साइकल वितरण
ब्राजिलका राष्ट्रपति र पाकिस्तानका विदेश मन्त्री पनि कोरोना संक्रमित
आज मिति २०७७ असार २४ गते बुधवारको राशिफल
आज भारतीय पूर्वकप्तान धोनीकाे जन्मदिन: अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटर र क्रिकेट समर्थकहरूले धोनीलाई बधाईकाे ओइरो
आज पूर्वराजा शाहको ७४ औँ जन्मदिन: (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाद्वारा शुभकामना व्यक्त
धरानको कृषि बजार नजिकै एक व्यक्ति मृत फेला